भारतको पुनामा अलपत्र बालिकाको उद्धार ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
भारतको पुनामा अलपत्र बालिकाको उद्धार !
२०७६ असोज १५ गते बुधवार
मुम्बई । भारतको पुनामा एक नेपाली बालिका अलपत्र अबस्थामा फेला परेकी छन् । शर्मिला पहरी नाम बताउने बालिकालाई, प्रेमको जाल रचेर नुवाकोट घर भएका किरण तामाङले यहाँसम्म ल्याएर छोडेको ती बालिकाले बताइन् । काठमाडौ बालाजुबाट भागेर नारायणघाटहुँदै असोज ४ गते कांकरभित्तामा एक हप्ता बसालेको र रेलमार्गद्वारा पुना ल्याएर पुना स्टेशनमा अलपत्र अवस्थामा छोडेर भागेको पहरीले बताइन् । एकछिन आउँछु, भनेर गएको तामाङ अहिलेसम्म आएन शर्मिलाले भनिन् ।
काभ्रे उरेली टोल १ मा बसोबास गर्ने शर्मिला केहिदिन पहिले पुना स्टेशनको भित्री ठाउँमा रुदै बसेको अवस्थामा नेपाल दलित पार्टीका कार्यकर्ता जगत रसाइली, नैन सिंह सुनार र जीत जनालाको सम्पर्कमा आएको, नेपाल दलित पार्टीका केन्दिय सचिवालय सदस्य प्रवीणसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिए । पीडित बालिका अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विश्वकर्माले बताए ।
नेपालमा दलित अभियन्ता सरु सुनारसंग सम्पर्क भएर, ती बालिकाको गाउँ र परिवारमा बारेमा सम्पुर्ण जानकारी दिएको केन्द्रि सचिवालय सदस्य प्रवीणसिंहले जानकारी दिए । उक्त बालिकाका लागि मुम्बईबाट सहयोगी टिम धिरेन्द्र टमट्टा अनि रमेश सिंह पुना लागेका छन् ।